လူသိနည်းတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးရဲ. အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းများ
[ August 16, 2018 ] ဝိတ်လည်းကျ ကင်ဆာလည်းပျောက်မယ့်အစားအစာ (၅) မျိုး Health Knowledges
[ August 16, 2018 ] အဆီပိုတွေပဲ ကျချင်တဲ့သူတွေအတွက် Health Knowledges
[ August 16, 2018 ] ရေချိုးနေစဉ် အပေါ့သွားခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ Health Knowledges
[ August 16, 2018 ] အံ့သြသွားမယ်. ကြက်သွန်နီဥ ခြေဖဝါး လေးမှာကပ်ပြီး အိပ်ကြည့်ရင် ရမည့်အကျိုးကျေးဇူး Health Knowledges
[ August 16, 2018 ] နေ့နံ အလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါး မှေးမှိန်တတ်သော အသက်အရွယ်နှစ်များ Heroscope
[ August 16, 2018 ] ပင်ပန်းလွန်းပေမယ့် တိုင်ပင်စရာ၊ အားကိုးစရာ ဘယ်သူမှအနားမှာမရှိတဲ့သူတွေအတွက် Knowledges
[ August 16, 2018 ] ခင်ပွန်းကို ချစ်တဲ့ ဇနီးသည်တွေ…ပိုင်ဆိုင်ကြရတဲ့အရာ Knowledges
[ August 16, 2018 ] ဆုံးပြီးလို့ ထင်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ မဖြစ်မနေ ပြန်လာပေးလိမ့်မယ်.. ဒါလေးပဲ လုပ်လိုက်ပါ။ Heroscope
[ August 16, 2018 ] စိတ်မကောင်းစရာ ဝမ်းနည်းစကားဆိုလိုက်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် Celebrity
[ August 16, 2018 ] ဒေါ် လာ 9.6 ဘီလီ ယံ စည်းစိမ် ကိုစွန့် ကာ ဘုန်းကြီး အပြီးပိုင်ဝတ်သွားတဲ့ မလေးရှား သူဌေး ananda krishnan ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသား International
August 10, 2018 admin Knowledges 0
ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ ကယ်လိုရီပါ ဝင်မှု အလွန်လျော့နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အများ အပြား ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B1 ၊ B2 နဲ့ B3၊ ဗီတာမင် စီ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဖော လစ်အက်စစ်၊ ဇင့်(သွပ်)၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ မဂ္ဂနိစ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တို့ ကောင်းစွာ ပါ ဝင်နေပါတယ်။
သံဓာတ်ပါဝင်မှု များပြီး ဘီတာကယ်ရိုတင်းပါဝင်မှုဟာ ပန်းဂေါ်ဖီ စိမ်းထက် နှစ်ဆ၊ ကယ်လ်စီယမ် ပါဝင် မှုက ဟင်းနုနယ်ရွက်ထက် နှစ်ဆနဲ့ ပို တက်စီယမ်ပါဝင်မှုက ငှက်ပျောသီးထက် နှစ်ဆ အသီးသီး ပါဝင်နေပါတယ်။ ကြက် ဟင်းခါးသီးမှာ
သွေးတွင်း သကြားဓာတ် ကို ကျစေတဲ့ အာနိသင်ရှိသလို Polypeptide P လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဆူလင်လို ဒြပ် ပေါင်းတစ်မျိုးလည်း ပါဝင်တာကြောင့် ဆီး ချိုရောဂါရှိသူတချို့အတွက် ကောင်းကျိုး ရှိကြောင်း လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
(၁) သွေးပြဿနာများ ကြက်ဟင်းခါးသီးအရည်ဟာ သွေး ဆိပ်သင့်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာနဲ့ ယား ယံမှုတွေကို ကုသရာမှာ အလွန်အကျိုး ကျေးဇူးများပါတယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက် ဟင်းခါးသီးအရည်ကို သံပရာရည်နဲ့ ရောကာ အစာမရှိချိန် ဖြည်းဖြည်းချင်း ငုံပြီး နေ့စဉ်သောက်ပေးရင် ၄-၆လ အကြာမှာ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုကို တွေ့ရပါ တယ်။
(၁၀) အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီး အရည် နှစ်အောင်စနဲ့ ရေရောထားတဲ့ ပျားရည်တစ်ခွက်ကို ရောသောက်ပေးရင် ပန်းနာရင်ကျပ်၊
လပြွန်ရောင်တာ စတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ သတိပြုရန် ဆီးချိုကုသဆေးသောက်နေတဲ့ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးအရည် မသောက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အလွန်အမင်း စားသောက်တာမျိုး ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ကွကျဟငျးခါးသီးမှာ ကယျလိုရီပါ ဝငျမှု အလှနျလြော့နညျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ အမြား အပွား ပါဝငျပါတယျ။ ဗီတာမငျ B1 ၊ B2 နဲ့ B3၊ ဗီတာမငျ စီ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျ၊ ဖော လဈအကျစဈ၊ ဇငျ့(သှပျ)၊ ဖော့ဈဖရပျဈ၊ မဂ်ဂနိဈနဲ့ အမြှငျဓာတျတို့ ကောငျးစှာ ပါ ဝငျနပေါတယျ။
သံဓာတျပါဝငျမှု မြားပွီး ဘီတာကယျရိုတငျးပါဝငျမှုဟာ ပနျးဂျေါဖီ စိမျးထကျ နှဈဆ၊ ကယျလျစီယမျ ပါဝငျ မှုက ဟငျးနုနယျရှကျထကျ နှဈဆနဲ့ ပို တကျစီယမျပါဝငျမှုက ငှကျပြောသီးထကျ နှဈဆ အသီးသီး ပါဝငျနပေါတယျ။ ကွကျ ဟငျးခါးသီးမှာ သှေးတှငျး သကွားဓာတျ
ကို ကစြတေဲ့ အာနိသငျရှိသလို Polypeptide P လို့ချေါတဲ့ အငျဆူလငျလို ဒွပျ ပေါငျးတဈမြိုးလညျး ပါဝငျတာကွောငျ့ ဆီး ခြိုရောဂါရှိသူတခြို့အတှကျ ကောငျးကြိုး ရှိကွောငျး လလေ့ာသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
(၁) သှေးပွဿနာမြား ကွကျဟငျးခါးသီးအရညျဟာ သှေး ဆိပျသငျ့တာကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အနာနဲ့ ယား ယံမှုတှကေို ကုသရာမှာ အလှနျအကြိုး ကြေးဇူးမြားပါတယျ။
လတျဆတျတဲ့ ကွကျ ဟငျးခါးသီးအရညျကို သံပရာရညျနဲ့ ရောကာ အစာမရှိခြိနျ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ငုံပွီး နစေ့ဉျသောကျပေးရငျ ၄-၆လ အကွာမှာ သိသာတဲ့ တိုးတကျမှုကို တှရေ့ပါ တယျ။
(၂) ကာလဝမျးးရောဂါ ကာလဝမျးရောဂါ အစောပိုငျးအ ဆငျ့မှာ ကွိတျခွထေားတဲ့ ကွကျဟငျးခါး ရှကျ လကျဖကျစားဇှနျး နှဈဇှနျးနဲ့ ကွကျ သှနျနီအရညျ လကျဖကျစားဇှနျး နှဈဇှနျး၊ သံပရာရညျ လကျဖကျစားဇှနျး တဈဇှနျး တို့ကို ဆတူရောပွီး နစေ့ဉျ သောကျပေး ပါ။
(၃) ဆီးးခြိုရောဂါ ကွကျဟငျးခါးသီးမှာ ပါတဲ့ အပငျ ထှကျအငျဆူလငျဟာ ဆီးနဲ့ သှေးထဲက သကွားဓာတျကို လြော့ကစြတေဲ့ အကြိုး ကြေးဇူး ရှိပါတယျ။ ကွကျဟငျးခါးသီးဟာ သှေးတှငျး အငျဆူ လငျအဆငျ့ကို တိုးစေ တာမြိုး မရှိဘဲ ဂလူးကို့ဈခံနိုငျရညျရှိမှုကို သိသိသာသာ ကောငျးမှနျစတော ဖွဈပါ တယျ။
(၆) အရကျနာကခြွငျး ကွကျဟငျးခါးသီးအရညျဟာ အ ရကျနာကတြဲ့ ဝဒေနာကို ကုသရာမှာ ကောငျးကြိုး ရှိပါတယျ။ အရကျသောကျ တာကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အသညျးဝဒေနာ တှကေို ပွုပွငျပေးပွီး အသညျးကို သနျ့ စငျစပေါတယျ။
(၇) ကိုယျခံစှမျးအား ကောငျးမှနျခွငျး ကွကျဟငျးခါးသီးအရညျဟာ ကိုယျ ခံစှမျးအားစနဈကို ကောငျးမှနျအောငျ တညျဆောကျပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ရောဂါ တှနျးလှနျနိုငျစှမျး ကို ကောငျးမှနျစေ ပါတယျ။
(၉) ဆိုးရီးယေးစဈအရပွေားအနာ ကွကျဟငျးခါးရှကျအရညျကို ပုံမှနျ သောကျပေးရငျ ဆိုးရီးယေးစဈနဲ့ တခွား ဖနျးဂပျဈမှိုစှဲတဲ့ အရပွေားအနာတှကေို သကျသာစပေါတယျ။
(၁၀) အသကျရှူလမျးကွောငျး ပွဿနာမြား လတျဆတျတဲ့ ကွကျဟငျးခါးသီး အရညျ နှဈအောငျစနဲ့ ရရေောထားတဲ့ ပြားရညျတဈခှကျကို ရောသောကျပေးရငျ ပနျးနာရငျကပျြ၊ လပွှေနျရောငျတာ စတဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျး ဝဒေနာတှကေို သကျသာစပေါတယျ။
သတိပွုရနျ ဆီးခြိုကုသဆေးသောကျနတေဲ့ ဆီးခြိုရောဂါရှိသူတှအေနနေဲ့ ကွကျဟငျးခါးအရညျ မသောကျခငျ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။ ကိုယျဝနျဆောငျတှအေနနေဲ့ ကွကျဟငျးခါးသီးကို အလှနျအမငျး စားသောကျတာမြိုး ရှောငျသငျ့ပါတယျ။
ဝိတ်လည်းကျ ကင်ဆာလည်းပျောက်မယ့်အစားအစာ (၅) မျိုး
ရေချိုးနေစဉ် အပေါ့သွားခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
အံ့သြသွားမယ်. ကြက်သွန်နီဥ ခြေဖဝါး လေးမှာကပ်ပြီး အိပ်ကြည့်ရင် ရမည့်အကျိုးကျေးဇူး
ပင်ပန်းလွန်းပေမယ့် တိုင်ပင်စရာ၊ အားကိုးစရာ ဘယ်သူမှအနားမှာမရှိတဲ့သူတွေအတွက်
ဆုံးပြီးလို့ ထင်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ မဖြစ်မနေ ပြန်လာပေးလိမ့်မယ်.. ဒါလေးပဲ လုပ်လိုက်ပါ။
စိတ်မကောင်းစရာ ဝမ်းနည်းစကားဆိုလိုက်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
ဒေါ် လာ 9.6 ဘီလီ ယံ စည်းစိမ် ကိုစွန့် ကာ ဘုန်းကြီး အပြီးပိုင်ဝတ်သွားတဲ့ မလေးရှား သူဌေး ananda krishnan ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသား
© Copyrighted 2018 © Pwintsan - All rights reserved